စတုက္ကနိပါတ် – Book of the Fours
အန ၄.၁: အနုဗုဒ္ဓသုတ် – Understanding [Thanissaro] [Bodhi]
အဘယ်အကြောင်းကြောင့် သတ္တဝါများ သံသရာ လှည့်လည်နေကြသနည်း။
အန ၄.၅: အနုသောတသုတ် – With the Flow [Thanissaro] [Bodhi]
ဤသံသရာတွင် တွေ့ရသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုး အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၀: ယောဂသုတ် – Bondage/Yokes [Nizamis | Thanissaro] [Bodhi]
ချည်နှောင်ခံရတတ်သည့် ယောဂ ၄ မျိုး အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၉: တတိယ အဂတိဂမနသုတ် – Off Course [Thanissaro] [Bodhi]
အဂတိလိုက်စားရသော အကြောင်းအရင်း ၄ မျိုးကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၂၄: ကာဠကာရာမသုတ် – At Kalaka’s Park [Thanissaro] [Bodhi]
မြတ်စွာဘုရားသည် တရားအလုံးစုံကို ကိုယ်တိုင်သိတော်မူသော်လည်း “ငါသိ၏ ငါမြင်၏ ဤမျှသာဖြစ်၏” ဟုယူတော်မှု၏။ ထိုတရားတို့ကို စွဲလန်းမနေ။
အန ၄.၂၈: အရိယဝံသသုတ် – The Discourse on the Traditions of the Noble Ones [Thanissaro] [Bodhi]
မည်သည့်ကာလမဆို အမြဲမှန်ကန်စွာ ကျင့်သုံးနေမည့် ရဟန်းတရား ၄ ပါးကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၃၁: စက္ကသုတ် – Wheels [Thanissaro] [Bodhi]
စည်းစိမ်ဥစ္စာ အခြံအရံ အကျော်အစောနှင့် ချမ်းသာခြင်းတို့ ပြည့်စုံလို ပါသလား၊ ဤသုတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အန ၄.၃၂: သင်္ဂဟသုတ် – The Bonds of Fellowship [Thanissaro] [Bodhi]
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကြား၊ မိဘနှင့် သားသမီးကြား ဆက်ဆံရေး အဆင်ပြေ ချောမွှေ့လိုပါသလား၊ ဤသုတ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
အန ၄.၃၅: ဝဿကာရသုတ် – With Vassakara [Thanissaro] [Bodhi]
ပုဏ္ဏားဝါဒအလိုအရ ပညာရှိတို့ ရှိအပ်သော တရား ၄ မျိုးနှင့် မြတ်စွာဘုရား အလိုအရ ပညာရှိတို့ ရှိအပ်သော တရား ၄ မျိုး မတူပုံကို တွေ့ရပါမည်။ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်မှ ပုဏ္ဏားဝါဒပညာရှိ တရားသည် လောကီ အမြင်မှကြည့်လျှင် အလွန်ယဉ်ကျေးမှု အဆင့်မြင့်သည်ကို တွေ့ရပါသည်။
အန ၄.၃၆: ဒေါဏသုတ် – With Dona [Thanissaro] [Bodhi]
ငြိမ်သက် အေးချမ်းနေသော မြတ်စွာဘုရားကို မြင်၍ ပုဏ္ဏားတစ်ဦးက “လူလေလော နတ်လေလော”ဟု မေးသော အကြောင်းဖြစ်သည်။
အန ၄.၃၇: အပရိဟာနိယသုတ် – No Falling Away [Thanissaro] [Bodhi]
“ဤတရား ၄ မျိုးကို လိုက်နာကျင့်သုံးလျှင် နိဗ္ဗာန်သည် အနီး၌သာ ဖြစ်၏”ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၄၁: သမာဓိဘာဝနာသုတ် – Concentration [Thanissaro]
သမာဓိထူထောင်လျှင် ဤအကျိုး ၄ မျိုးထဲမှ တစ်မျိုးမျိုးကို ရနိုင်သည်။ ယင်း ၄ မျိုးတို့မှာ ၁. ဈာန်ရ၍ အေးချမ်းခြင်း ၂. ဉာဏ်အမြင် ရခြင်း ၃. အောက်မေ့ခြင်း ‘သတိ’ နှင့် ဆင်ခြင်ဉာဏ် ‘သမ္ပဇဉ်’ ရခြင်း ၄. အာသဝေါတရားတို့ ကုန်ခန်းခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
အန ၄.၄၂: ပဉှဗျာကရဏသုတ် – Questions [Thanissaro]
စကားပြောဆို ဆွေးနွေးရာတွင် မှန်တာပြောရုံသက်သက်ဖြင့် မြတ်စွာဘုရား အလိုတော်သို့ မရောက်၊ ဤသုတ်တွင်ပါသော အကြောင်း ၄ မျိုးနှင့်လည်း ကိုက်ညီရသည်။
အန ၄.၄၅: ရောဟိတဿသုတ် – To Rohitassa [Thanissaro]
မွေးခြင်း အိုခြင်း နာခြင်း သေခြင်း ကင်းသောနေရာ လောကတွင်လိုက်ရှာစရာမလို၊ ဤကိုယ်တွင် ရှာရသည်။
အန ၄.၄၉: ဝိပလ္လာသသုတ် – Distortions of the Mind/Perversions [Olendzki | Thanissaro]
သညာ၏ ဖောက်ပြန် မှားယွင်းမှု ၄ မျိုးကြောင့် ယောဂ ၄ မျိုးဖြင့် ချည်နှောင်ခံရ၍ သံသရာလည်နေရသည်။
အန ၄.၅၀: ဥပက္ကိလေသသုတ် – Obscurations [Thanissaro]
ရဟန်းတို့ကို ညစ်နွမ်းစေသော တရား ၄ မျိုးအကြောင်းကို ဟောထားပါသည်။
အန ၄.၅၅: ပဌမ သမဇီဝီသုတ် – Living in Tune [Thanissaro] [Bodhi]
လင်နှင့် မယား ဘဝအဆက်ဆက် အတူတူပေါင်းသင်း လိုပါသလား၊ ဤသုတ်တွင် မြတ်စွာဘုရားက နည်းပေးထားပါသည်။ နကုလပိတာသူကြွယ်ဇနီးမောင်နှံသည် “ငါနှင့် အကျွမ်းဝင်သော စကားကို ဆိုကုန်သော ငါ၏တပည့် ဥပါသကာ ဥပါသကာမ တို့တွင် နကုလပိတာသူကြွယ်ဇနီးမောင်နှံသည် အမြတ်ဆုံး ပေတည်း”ဟု မြတ်စွာဘုရား ချီးမြောက်တော်မူသော ဥပါသကာ ဥပါသကာမတို့ ဖြစ်သည်။
အန ၄.၆၂: အာနဏျသုတ် – Debtless [Thanissaro] [Bodhi]
]မြတ်စွာဘုရားသည် ကြိုးစားအားထုတ်၍ ရှာမှီးထားသော စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့ကို လောကီလူဘဝတွင် ချမ်းသာသောအရာဟု အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ သို့သော် အပြစ်မရှိမှု ချမ်းသာသည် အမြင့်ဆုံးဖြစ်သည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၆၇: အဟိရာဇသုတ် – A Snake/ByaSnake [Piyadassi | Thanissaro]
မေတ္တာပို့သခြင်းဖြင့် မြွေဘေးကင်းနည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၇၃: သပ္ပုရိသသုတ် – A Person of Integrity [Thanissaro]
သူတော်ကောင်းနှင့် သူယုတ်မည်သို့ ခွဲခြားမည်နည်း။ ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး လက်ခံနိုင်သော အချက်အလက်များ ပါရှိပါသည်။
အန ၄.၇၇: အစိန္တေယျသုတ် – Unconjecturable [Thanissaro]
ဤအကြောင်းအရာ ၄ မျိုးကို တွေးတောကြံစလျှင် ဆင်းရဲပင်ပန်း၍ ရူးသွပ်ခြင်းသာ ဖြစ်လိပ်မည်။
အန ၄.၇၉: ဝဏိဇ္ဇသုတ် – Trade [Thanissaro]
ကြိုးစားအားထုတ်၍ စီးပွားရှာကြသူတို့တွင် အချို့သူတို့မှာ မှန်းထားသည်ထက် အောင်မြင်အဆင်ပြေ၍ အချို့သူတို့မှာ မအောင်မြင်ကြ၊ အဘယ်ကြောင့်နည်း။ ဤသုတ်တွင် မြတ်စွာဘုရားက ရှင်းလင်းပြောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၈၅: တမောတမသုတ် – Darkness [Thanissaro]
ချမ်းသာသောမိဘ၊ ချမ်းသာသောတိုင်းပြည်၌ ပဋိသန္ဓေနေရန် ရွေးချယ်၍မရခဲ့၊ သို့သော် ယခုဘဝ တိုးတက်ရန် နောင်ဘဝကောင်းစားရန်မှာ ယခုသင့်လက်ထဲတွင် ရှိနေပါသည်။
အန ၄.၉၄: တတိယ သမာဓိသုတ် – Concentration (Tranquillity and Insight) [Thanissaro]
သမထနှင့် ဝိပဿနာကိုစုံတွဲ၍ ထူထောင်ရန် ဟောကြားထားသော သုတ်ဖြစ်ပါသည်။
အန ၄.၉၅: ဆဝါလာတသုတ် – Wood fromaPyre/The Firebrand [Buddharakkhita | Thanissaro] [Bodhi]
သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့် မိမိအကျိုးဆောင်ခြင်း မည်သည်ကပိုမြတ်သနည်း။ သင်မထင်ထားသော အဖြေဖြစ်နိုင်သည်။
အန ၄.၉၆: ရာဂဝိနယသုတ် – The Subduing of Passion [Thanissaro]
သူတစ်ပါးအကျိုးဆောင်ခြင်းနှင့် မိမိအကျိုးဆောင်ခြင်းပေါ်မူတည်၍ ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုးကွဲပြားပုံကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၉၉: သိက္ခာပဒသုတ် – Trainings [Thanissaro]
သီလဆောက်တည်ခြင်းပေါ်မူတည်၍ ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုးကွဲပြားပုံကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၀၂: ဒုတိယ ဝလာဟကသုတ် – Thunderheads [Thanissaro]
တရားတော်များကို လေ့လာကျွမ်းကျင်ရုံနှင့် မလုံလောက်၊ သစ္စာတရားကို ကိုယ်တိုင်ထိုးထွင်းသိဖို့ လိုသေးသည်။
အန ၄.၁၁၁: ကေသိသုတ် – To Kesi the Horsetrainer [Thanissaro]
မြတ်စွာဘုရား၏ဂုဏ်တော်တစ်ပါးတွင် “ဆုံးမထိုက်သူတို့ကို ဆုံးမတတ်သည့် အတုမဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ဖြစ်တော်မူပါ၏၊” ဟုပါရှိပါသည်။ ဤသုတ်တွင် ဆုံးမနည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၁၃: ပတောဒသုတ် – The Goad-stick/The Goad [Thanissaro | Woodward]
တွေ့ကြုံရသော ဆင်းရဲခြင်း၊ သေခြင်း ဒုက္ခတို့၏ အတိုင်းအတာပေါ်မူတည်၍ တရားဘာဝနာ ဆောက်တည်ကြသော ပုဂ္ဂိုလ် ၄ မျိုး အကြောင်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၁၅: ဌာနသုတ် – Courses of Action [Thanissaro]
ဆောင်ရွက်လိုသော အရာနှင့် အကျိုးရှိမှု အမြဲမတိုက်ဆိုင်သောအခါဘယ်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်နည်း။ ဤသုတ်တွင် မြတ်စွာဘုရားက အကြံပေးထားပါသည်။
အန ၄.၁၂၃: ပဌမ နာနာကရဏသုတ် – Mental Absorption (1) [Thanissaro]
သာမန်လူနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တို့ ဈာန်သမာပတ်ရ၍ ဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်ခြင်းတူနိုင်သော်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တို့မှာ ထိုဗြဟ္မာဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်သည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၂၄: ဒုတိယ နာနာကရဏသုတ် – Mental Absorption (2) [Thanissaro]
ဈာန်သမာပတ်ရနေချိန်၌ ခန္ဓာငါးပါးကို ရှုခြင်း ၁၁ မျိုးဖြင့် ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသောအခါ အနာဂါမ်တို့နေရာ သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်၏။
အန ၄.၁၂၅: ပဌမ မေတ္တာသုတ် – Loving-kindness (1)/Good Will (1) [Ñanamoli | Thanissaro]
သာမန်လူနှင့် မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တို့ ဗြဟ္မာဝိဟာရ (မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာ) ဖြင့် ဈာန်သမာပတ်ရ၍ ဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်ခြင်းတူနိုင်သော်လည်း မြတ်စွာဘုရား၏တပည့်တို့မှာ ထိုဗြဟ္မာဘုံ၌ပင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုနိုင်သည်ဟု ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၂၆: ဒုတိယ မေတ္တာသုတ် – Loving-kindness (2)/Good Will (2) [Ñanamoli | Thanissaro]
ဗြဟ္မာဝိဟာရ (မေတ္တာ၊ကရုဏာ၊မုဒိတာ၊ဥပေက္ခာ) ဖြင့် ဈာန်သမာပတ်ရနေချိန်၌ ခန္ဓာငါးပါးကို ရှုခြင်း ၁၁ မျိုးဖြင့် ရှုနိုင်ခဲ့ပြီး သေဆုံးသောအခါ အနာဂါမ်တို့နေရာ သုဒ္ဓါဝါသဗြဟ္မာဘုံသို့ ရောက်၏။
အန ၄.၁၄၄: သြဘာသသုတ် – Brightness [Thanissaro]
အလင်းရောင်အားလုံးတွင် ပညာအလင်းရောင်သည် အမြတ်ဆုံးဖြစ်သည်။
အန ၄.၁၅၉: ဘိက္ခုနီသုတ် – The Nun [Thanissaro]
ဤကိုယ်ခန္ဓာသည် အာဟာရ၊တဏှာ၊မာနနှင့် မေထုန်မှုကို မှီ၍ဖြစ်တည်လာသည်။ ထိုအာဟာရ၊တဏှာနှင့် မာနကို အာဟာရ၊တဏှာ၊မာနကိုပင်မှီ၍ ပယ်ရသည်။ သို့သော် မေထုန်မှုကို မေထုန်မှုကိုမှီ၍ မပယ်ရ။
Eon (World cycle) တစ်ခုဖြစ်ချိန် ပျက်ချိန် များကို နှစ်ကာလ အပိုင်းအခြားဖြင့် ဖော်ပြရန် မလွယ်ကြောင်း ဟောကြားထားပါသည်။ မြန်မာပြန်တွင် “ကပ္ပ” Eon (World cycle) ကို “ကမ္ဘာ” ဟု နားလည်လွယ်ရန် ပြန်ဆိုထားပါသည်။
အန ၄.၁၆၂: ဝိတ္ထာရသုတ် – (Modes of Practice) in Detail [Thanissaro]
မိမိ၏ပင်ကိုယ်စရိုက်ပေါ်မူတည်၍ တရားအားထုတ်ရာတွင် ချမ်းသာစွာကျင့်ရခြင်း သို့မဟုတ် ဆင်းရဲစွာကျင့်ရခြင်း ဖြစ်နိုင်သော်လည်း လျှင်မြန်စွာတရားတိုးတက်ရေးမှာ မိမိအရည်အချင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု စသည်တို့ဖြင့်သာဆိုင်သည်။
အန ၄.၁၆၃: အသုဘသုတ် – Unattractiveness [Thanissaro]
တရားအားထုတ်ရာတွင် ချမ်းသာစွာကျင့်နည်းနှင့် ဆင်းရဲစွာကျင့်နည်း နှစ်နည်းရှိသော်လည်း လျင်မြန်စွာတရားတိုးတက်ရေးမှာ မိမိအရည်အချင်း ကြိုးစားအားထုတ်မှု စသည်တို့ဖြင့်သာဆိုင်သည်။
အန ၄.၁၆၄: ပဌမ ခမသုတ် – Tolerant (1) [Thanissaro]
၄ မျိုးသော အကျင့်တို့တွင် အဘယ်အကျင့်ကို ကျင့်သုံးမည်နည်း။
အန ၄.၁၆၅: ဒုတိယ ခမသုတ် – Tolerant (2) [Thanissaro]
အန ၄.၁၇၀: ယုဂနန္ဓသုတ် – In Tandem [Thanissaro]
အရှင်အာနန္ဒာက သမထနှင့် ဝိပဿနာ အချင်းချင်း အမှီပြု၍ ရဟန္တာအဖြစ်သို့ ရောက်ရပုံကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၇၃: မဟာကောဋ္ဌိကသုတ် – To Kotthita [Thanissaro]
‘ဖဿာယတန’ ခြောက်ပါး တို့၏ အကြွင်းမဲ့ ကင်းခြင်း ချုပ်ခြင်းသည် ပပဉ္စတရားတို့၏ ချုပ်ခြင်းသည် ဖြစ်၏။
အန ၄.၁၇၈: ဇမ္ဗာလီသုတ် – The Waste-water Pool [Thanissaro]
သကာယနှင့် အဝိဇ္ဇာ ချုပ်နိုင်ပုံ မချုပ်နိုင်ပုံကို အလွန်ပေါ်လွင်သော ဥပမာများဖြင့် ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၇၉: နိဗ္ဗာနသုတ် – Unbinding [Thanissaro]
အဘယ်အကြောင်းကြောင့် အချို့သူတို့ မျက်မှောက်ဘဝတွင် နိဗ္ဗာန်မရနိုင်ကြသနည်း။
အန ၄.၁၈၁: ယောဓာဇီဝသုတ် – The Warrior [Thanissaro]
ရဟန်း၏ အင်္ဂါ ၄ ရပ်ကို မြားသည်တော် သူရဲကောင်း ဥပမာဖြင့် ဟောထားပါသည်။
အန ၄.၁၈၃: သုတသုတ် – On What is Heard [Thanissaro]
စကားကို မှန်တိုင်း ပြောသင့်သည် ထင်ပါသလား။
အန ၄.၁၈၄: အဘယသုတ် – Fearless [Thanissaro]
အချို့ သေခြင်းတရားကို ကြောက်၍ အချို့ မကြောက်၊ အဘယ့်ကြောင့်နည်း။
အန ၄.၁၉၂: ဌာနသုတ် – Traits [Thanissaro]
လူ့စရိုက် လူ့အရည်အသွေးစီစစ်နည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၁၉၉: တဏှာသုတ် – Craving [Thanissaro]
မိမိကိုယ်ကို တဏှာရှိမရှိ မည်သို့စစ်မည်နည်း။ ဤသုတ်တွင်ပါသော စကား ၃၆ ခွန်းကို စိတ်ထဲတွင် ပြောမိပါက တဏှာရှိနေသည်။
အန ၄.၂၀၀: ပေမသုတ် – Affection [Thanissaro]
ချစ်ခြင်းကြောင့် ချစ်ခြင်းဖြစ်၏။ ချစ်ခြင်းကြောင့် ဒေါသဖြစ်၏။ ဒေါသကြောင့် ချစ်ခြင်းဖြစ်၏။ ဒေါသကြောင့် ဒေါသဖြစ်၏။ ချစ်ခြင်းနှင့် ဒေါသကင်းနည်းကို ဟောကြားထားပါသည်။
အန ၄.၂၃၇: အရိယမဂ္ဂသုတ် – The Noble Path [Thanissaro]
ကံ ၄ မျိုး၏ အကျိုးကို ဟောကြားထားပါသည်။ မည်းညစ်သောကံထက် ဖြူစင်သောကံက ပိုကောင်းပါသည်။ သို့သော် မမည်းညစ် မဖြူစင်သည့် ကံကုန်ဆုံးသော ကံက ပို၍ကောင်းပါသည်။
အန ၄.၂၄၅: သိက္ခာနိသံသသုတ် – Training [Thanissaro]
ရဟန်းတရားသည် အကျင့်သိက္ခော၊ ပညာ၊ ဝိမုတ္တိ၊ သတိ တို့ဖြင့် ပြီးပြည့်စုံရသည်။
အန ၄.၂၅၅: ပရိယေသနသုတ် – Searches [Thanissaro]
အရိယာမဟုတ်သူတို့သည် အိုခြင်း၊ နာခြင်း၊ သေခြင်း စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကို ရရှိလျှက် လိုက်၍ရှာနေကြသည်။
အန ၄.၂၅၈: ကုလသုတ် – On Families [Thanissaro]
မိသားစု စည်းစိမ် လျော့နည်းခြင်းကင်းလို ပါသလား၊ ဤသုတ်တွင် နည်းပေးထားပါသည်။
အန ၄.၂၆၂: အရညသုတ် – A Wilderness Dweller [Thanissaro]
တောကျောင်း၌ သတင်းသုံးလိုသော ရဟန်းတို့ရှိရမည့် တရား ၄ ပါး။